သူတို့ဟာ HG Wells ရဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် eReaders အားလုံး
သူတို့က HG Wells မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးသောထိတ်လန့်ဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေသည်
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်သည့်အခါမင်းတို့ထဲကများစွာသောသူက၎င်းသည်စာရေးသူ၏ပုံမှန်တီထွင်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်၊ ၎င်းသည်ရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းအမည်ပြောင်းထားသည်သို့မဟုတ်ငါတို့ထင်သကဲ့သို့စာရေးသူနှင့်မတူပါ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းမှားတယ် မကြာသေးမီက စာရေးဆရာ HG Wells မှထိတ်လန့်ဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်.
ကျန်သူ၏လက်ရာများကဲ့သို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်၎င်းပုံပြင်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သည် နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ၏လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှတ်ပုံတင်နေစဉ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို "The Haunted မျက်နှာကျက်" ဟုခေါ်ပြီးစပိန်ဘာသာဖြင့် The Haunted Roof ဟုဘာသာပြန်နိုင်သည်။
ဒီအလုပ်ကိုဘယ်အချိန်ရှာတွေ့ပြီလဲ အီလီနွိုက်စ်တက္ကသိုလ်မှသူတို့ပိုင်ဆိုင်သောမော်ကွန်းတိုက်ကိုဒီဂျစ်တယ်တီထွင်ရန်နှင့်သူ၏လက်ရာများကိုစုဆောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကငယ်ရွယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလက်ရေးစာမူအားလုံးကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းနဲ့ငှားခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ဒီစာမူတွေထဲမှာဒီထိတ်လန့်ဖွယ်ပုံပြင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများက၎င်းသည်စာရေးသူသည်အသက် ၃၀ အရွယ် ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီးထိတ်လန့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းများကိုရေးသားလေ့ရှိကြောင်းရေးသားခဲ့သည် The Haunted Ceiling သည်စာရေးသူ၏ဤအမျိုးအစားတွင်တစ်ခုတည်းသောဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါ.
ဒီအလုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးစပိန်အပါအ ၀ င်အခြားဘာသာစကားများကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဆိုသွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင်ဒီဂျစ်တယ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစာရေးသူရဲ့လတ်တလောမှာမကြာသေးခင်ကရှိနေပေမယ့်စာရေးသူနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ebooks တွေရဲ့တခြားစာပေတွေအကြားမှာဒီစာအုပ်နဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကြားမှာအချိန်နည်းနည်းပဲကုန်မှာပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သို့မည်ပုံစပ်စုနေဆဲဖြစ်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းသည်စာရေးဆရာအသစ်များတည်ထောင်ထားသောစာအသစ်များနှင့်စာသားအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် ငါတို့နှင့်မရှိတော့။
HG Wells သည်ဤဥပမာ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အလားတူဖြစ်ရပ်များရှိသည့်အခြားစာရေးဆရာများနှင့်အခြားအလားတူပိုမိုပြproblemနာရှိသောကိစ္စရပ်များရှိသည် အဆိုပါအန်းဖရန့်ကိစ္စ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်ဤအလုပ်များကိုစာအုပ်အသစ်များဝယ်ခြင်းငှါ၎င်း, စာအုပ်တွေချေးငှားရန်ပိုက်ဆံအဖြစ်မဖြစ်မနေ, မော်ကွန်းတိုက်သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်ရဲ့အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » eBooks » သူတို့က HG Wells မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးသောထိတ်လန့်ဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေသည်
Hisense A2 သည်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပါသောလက်ကိုင်ဖုန်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းရှိသည်